Rabiana mitebiteby (flatulence): ny antony, ny soritr'aretina, ny fitsaboana - Biby fiompy - 2019
Inona no tokony hataonao raha manana kibo mirobona ny bitro
Ny labiera dia manana rafi-pandaminana mahatsiravina, ary tsy miteraka lozam-pifamoivoizana. Mety hampidi-doza ho an'ny biby io toe-javatra io.
Tena zava-dehibe ny mamantatra izany amin'ny fotoana sy ny fitsaboana.
Fantatsika hoe inona no mety hiteraka olana eo amin'ny bitro, ny fomba itondrana azy, ary ny fomba hanatanterahana ny fisorohana.
Ny areti-nify sy ny tovana
Tsy fahampian'ny fihetsiketsehana
lanja be loatra
Herisetra sy fananahana
Inona no hikarakarana ny bitro rehefa mitebiteby?
Antony hafa amin'ny fampidirana
GI ny aretina
Antony mahatonga ny fandosirana
Alohan'ny hanombohana ny fitsaboana dia tsy maintsy zarainao aloha ny antony mahatonga an'io toe-javatra io, ary mety ho hafa izy ireo.
Mianara bebe kokoa momba ny aretin'ny bitro, indrindra fa ny coccidiose, ny scabies, lichen, listeriosis, encephalose, myxomatosis, aretina hemorrhag viraliny.
Raha miteraka fanaintainana noho ny aretina amin'ny nify sy ny tohana izy, dia manomboka tsy mihinana sakafo matsiro izy. Ny tsy fahampian'ny cellulose dia miteraka fahasimban'ny digestion sy ny tsy fitoviana amin'ny mikroflora, izay mitarika amin'ny fametrahana gazy, ary ny kibon'ny kibo dia mitoloko.
Ny legioma, ny voankazo sy ny voankazo taorian'ny nanasana dia ahitana rano be loatra. Ny zana-ketsa aorianan'ny fisotroan-dronono na ny fofona maitso dia tena feno hafanana tokoa. Alohan'ny hanoloran'ny zana-bozaka ahitra sy legioma, dia tokony hadio izy ireo.
Zava-dehibe izany! Tokony hisotro amin'ny rano fotsiny ny rano, fa tsy amin'ny sakafo. Ny tsy fahampian'ny rano dia manakana ny famoahana ary mety ho antony maratra ihany koa, noho izany dia mila mahazo rano madio foana ny bitro. Amin'ny olona iray dia ampy ampy ny lany 0.5 litatra isan'andro.
Izany no antony mahazatra indrindra amin'ny fanimbana ao anaty bitro. Sakafo mialokaloka na voamaina, ahitra miaraka amin'ny famonoana pestisialy na zavamaniry tsy azo hanina, sakafo mihintsy izay efa napetraka teo amin'ny mpaninjara nandritra ny fotoana lava - izany rehetra izany dia mety hiteraka ny mikroflora mikraoba ary hitarika amin'ny fikorotanana.
Ny rambony dia malemy noho ny fikorotanana ny tsinay. Ho fampiroboroboana tsy tapaka ny sakafo sy ny voankazo voatery dia mila mihinana sakafo tsy mihinana amin'ny voankazo izy ireo, raha tsy izany dia mety hitranga ny stasis. Ny sakafo mahamay no antony mahazatra indrindra amin'ny fihenan'ny bitro.
Misy ny vokatra mety hampitombo ny fitomboan'ny gaza. Io no karaoty, legumes, alfalfa, biriky, bibidia miaraka amin'ny tops. Ny tsy fahampian-tsakafo tsy mety dia afaka miteraka io toe-javatra io, toy izany koa ireo mpamboly za-draharaha miala amin'izany.
Jereo ny lisitry ny zavamaniry voarara amin'ny bitro.
Ny tsy fisian'ny hetsika dia mampihena ny hozatry ny biby ary manimba ny tsinay sy ny fihetsika sakafo. Ny biby sedanina dia mety hahazoana lanjany be loatra, izay miteraka asa mahomby amin'ny taova anatiny. Ny olana toy izany dia tandindon'ny biby voatahiry ao anaty tranom-borona kely.
Ao amin'ny bitra mavesatra, ny tavy miparitaka dia manosihosy ny taova anatiny ary manelingelina ny peristalsis ao anaty tsinay. Mihanjahanja ny sakafo ary mitebiteby. Ankoatra izany, misy olona matavy miboridana, izay manimba ny fihinana. Ireo olona matavy ireo dia tokony hihinana sakafo sy manome sakafo be dia be ao amin'ny cellulose ary misy calories vitsivitsy. Ny vatana dia miteraka vokatra mahatsiravina ho an'ny bitro - avy amin'ny tsy fahampian'ny fahafatesana.
Antony hafa mahazatra mahakasika ny alikaola. Miaraka amin'ireny aretina ireny, ny bitro dia very fanirian-dratsy, lasa lozargic, izay miteraka ny fampitsaharana ny dipoavatra. Ankoatr'izay, ny fanafody antibiotika amin'ny aretina dia mety miteraka tsy fitoviana eo amin'ny tsinay sy ny fanangonana gaza.
Tena mampidi-doza sy ny fanafihana ny tsinay. Matetika izy ireo dia mivoatra eo an-dalan'ny toe-javatra tsy ara-pitondran-tena ao amin'ny bitro ary misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny tanora.
Fantaro ny mampidi-doza ny aretin'ny bitro ho an'ny olombelona.
Ny fihoaram-pefy dia mety ho antony iray sy vokatry ny famonoana amin'ny bitro. Mety ho samy hafa ny antony mahatonga izany: ny tsy fisian'ny rano, ny antibiotika, ny adin-tsaina, ny sakafo tsy mihinam-paritra, ny stasis gastrointestinal, ny fiteran'ny gastrointestinal ny etiologies samihafa. Ny tsy fisian'ny fefy na baoritra madinidinika loatra dia tokony ho mailo, ary tokony hanomboka avy hatrany ny fitsaboana ny foitra.
Amin'ny toe-javatra voajanahary, ny bitro dia miaina anaty lavaka, izay tsy misy mafana. Ireo biby ireo dia tsy mahandro, ary ny hafanana fahavaratra ho azy ireo dia manimba. Ny faharetan'ny mari-pana amin'ny hafanana dia miakatra amin'ny +25 ° С. Tavoahangy plastika amin'ny ranomandry avy amin'ny frizidera dia mety ho toy ny cooler ho an'ny bitro.
Ny fandaniana ity dingana ity dia adin-tsain'ny bitro izay mampihena ny hery fiarovana ary mitondra any amin'ny aretina isan-karazany, anisan'izany ny fiterahana. Amin'ny mari-pana eo amin'ny 35 ° C, ny vatany dia mandresy ary tsy mahazaka hafanana mandritra ny fotoana maharitra.
Ireo zazalahy, vehivavy bevohoka sy mihomehy dia sarotra be ny manaiky. Ao anatin'ny hafanana sy ny haavo avo dia avo kokoa ny hafanana amin'ireo biby ireo.
Jereo ny teknolojian'ny fanampiana bitro ho an'ny masoandro.
Zava-dehibe ny mamantatra ny olana amin'ny fotoana sy manomboka ny fitsaboana, ka tokony hifantoka amin'ireto soritr'aretina ireto ianao:
fifanarahana ao amin'ny peritoneum;
Mihorakoraka mafy sy mihovotrovotra ao amin'ny kibony, indraindray ny haba dia mihaino ny tsinain'ny biby fiompy miaraka amin'ny stethoscope mba hametrahana famantarana ny fitomboan'ny fitomboan'ny entona;
ny fihenanam-bolo sy ny haben'ny baolin'ny kôkôsy, ny fandotoana ny gonika;
Mahatsapa ny kibon'ny kibo
Zava-dehibe izany! Ny fisehoan-javatra toy izany matetika dia miseho eo an-dalam-pandrefesana ireo aretina vokatry ny areti-mifindra. Raha mihalehibe ny mari-pana, dia hita fa marefo sy malemy mandritra ny fotoana maharitra ny glycose amin'ny volavolan-tsolika, ny clot ny ra mandriaka na ny bitro - ireo dia famantarana milaza ny fisian'ny aretina goavana. Ny biby any amin'ireny tranga ireny dia tena mila ny fanampian'ny mpitsabo.
Tokony hohajaina avy hatrany ny flatulence aorian'ny fijerena azy. Raha tsy misy marika amin'ny aretina hafa, dia afaka miatrika ny tenanao manokana ianao.
Mba hanamaivanana ny toetry ny biby amin'ny fampiasana fanasitranana. Ho an'ity bitro ity, arosoy amin'ny lohanao ny lohanao, ny lohanao manatona anao, avelao ny tebiteby ary manomboka manao izany.
Mba hanaovana izany, dia manaova fanamaivanana ny kibo amin'ny fanerena maivana amin'ny diany amin'ny famantaranandro na eo amin'ny lalana avy amin'ny kibon'ny ambony mankany amin'ny rambony. Ireo hetsika dia vita mandritra ny 5-7 minitra. Izy ireo dia natao hanatsarana ny fikorotanana amin'ny tsinay. Tsy tokony hahatsapa fanaintainana ny biby.
Tokony atao isaky ny adiny ny fanasitranana ny ratra, fa raha tsy manampy izy dia tokony handray fepetra hafa.
Fanafody fanasitranana: lahatsary
Ho an'ny fanasitranana tsinay dia azo atao izany. Ampiasao ny rano madio na voadio. Ao anaty rano misy rano misy 0,5 litatra no mifangaro miaraka amin'ny menaka fanaovan-jiro solifara sy magnesium sulfate.
Enema dia vita amin'ny famonoana kely. Ny tendrony dia natsangana ho any amin'ny halaliny 1,5-1.8 cm. Ilaina ny manao fandinihan-tena tsara, satria ny tsinay ao amin'ny bitro dia tena mora vidy. Ny fanasitranana ny ratra amam-bony dia afaka manatsara ny vokatr'io fomba fiasa io.
Raha sendra misy fihenam-bidy, dia azo atao ny mampidi-doza alohan'ny biby. Satria ampiasaina io solika io, izay ampiasaina ary mametraka siramamy tsy misy fanjaitra ao am-bava. Ampandrosoana menaka solika iray ihany no ampiasaina - tsy ilaina ny bitro.
Fantaro raha afaka mamokatra burdock, kankana, tavokely, siramamy, serealy, mofo, voatavo, katsaka.
Afaka manamaivana ny fepetra sy manala ireo ankizy gazy "Espumizan", azo amidy malalaka amin'ny famokarana. Ny olon-dehibe dia omena 2 ml miaraka amin'ny filalaovana tsy misy fanjaitra amin'ny fotoana iray. Ny biby dia tsy tokony omena mihoatra ny 20 isanjaton'io fanafody io isaky ny 1 kg ny lanjany. Ny fanafody dia tokony halaina isaky ny 3 ora. Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, dia mety hihena ora iray ny fandaharam-potoana amin'ny fandraisana azy.
Raha misy fanaintainana mafy amin'ny biby iray, dia mety hahatonga azy ireo ho faty izany. Amin'io tranga io, ny veterinariana dia nomena ny hanome baiko ny tsindrona bitika amin'ny fitsaboana "No-Spa" amin'ny alàlan'ny fitsaboana 0,2 ml isaky ny 1 kg lanjany 2-3 heny isan'andro. Ny fampiasana ny tsindrona toy izany dia mety raha toa ny adin-tsakafo dia manelingelina, fa tsy manampy amin'ny poizina, ny aretina ary ny fanafihana, fanesorana tsina.
Fantaro bebe kokoa momba ny fahadiovan'ny bitro.
Ho an'ny fanavakavahana dia afaka mandrotsaka "Rimadin" ianao amin'ny dingan'ny 2 mg isaky ny 1 kg. Ny injections dia natao in-2 isan'andro. Ity zava-mahadomelina ity dia tsy mampidi-doza ary azo ampiasaina mandritra ny tapa-bolana.
Ho an'ny olona mihamalemy mafy, dia natao ny fitsaboana ny vahaolana glucose. Mba hanaovana izany, ny vahaolana saline dia mifangaro amin'ny 5% glucose amin'ny tahan'ny 1: 1 ary 2-3 na isan'andro dia atolotra ho an'ny doka iray 10 ml isaky ny 1 kg ny lanjany.
Rehefa mitsoka dia tokony hijanona tsy tapaka ny sakafo mahazatra - legioma sy zavamaniry. Ny biby marary dia tokony homena sakafo sy zava-pisotro, izay hanorina ny fiasan'ny rafi-pandaminana.
Ny jono mitovitovy amin'ny flatulence dia tokony homena ireto manaraka ireto:
Famokarana ronono (tsara ho an'ny entona ao anaty tsinay);
misy hay tsara ho tsara (mandritra ny 2-3 andro);
fandroana ny bibikely: noho izany, misy arina bitika kely dia harotsaka amin'ny rano mangatsiaka, voajanahary ary mafana, satria ny zava-pisotro dia manome 30-50 ml;
mahasoa rehefa mitebiteby amin'ny sakafo omena ireto voankazo manaraka ireto - ramanavy, dandelion, maman, dill, kankana, parsley;
Toaka kely sy zucchini dia sakafo sakafo ho an'ny bitro;
Taorian'ny 2-3 andro, ankoatra ny zay, dia ahitana karazan-tsakafo ho sakafo izy ireo, noho izany dia manapaka sampana maromaro ary manamaivana izany kely.
Fantatrao ve? Ny labasy dia manao fihetsika maotina 120 ao anatin'ny iray minitra. Manana tsiro 17 miliara izy ireo, noho izy ireo mahita sakafo mety ho azy ireo. Saingy eo amin'ny toeran'ny fahababoana, miankina amin'ny tompony fotsiny ny kalitaon'ny sakafo.
Raha vantany vao mijanona ny fivoahana dia afaka manomboka tsikelikely hanome legioma sy zana-kazo ny bitro. Amin'ny voalohany dia manome dill of dill, balsem lemon, cilantro, oregano, seleri, sombiny kely poma, karoty.
Mba hampihenana ny mety ho voka-dratsin'ny fikapohana sy ny aretina ao amin'ny rafi-pandaminana, dia manoro hevitra anao ny manam-pahaizana hanaraka ireto torohevitra manaraka ireto:
Manaova fanaraha-maso akaiky ny fitondran-tena sy ny toetry ny biby, jereo ny nify sy ny kibo.
Sasao ny ahitra sy ny legioma avy amin'ny hatsembohana tafahoatra, alohan'ny hanomezana ny bitro hifehy ny kalitaony. Ataovy azo antoka fa mandany sakafo ampy amin'ny biby ny biby.
Alao ny tranom-borona mahazatra tsy tapaka, mba tsy hikorontana volon-davenona, hanaraha-maso ny fahadiovana sy ny fepetra ara-pahasalamana.
Manaova famolavolana vokatra entona entona, aza omena ranom-boankazo, voankazo ary legioma.
Tokony ho malalaka tsara ilay kalisa. Ny Fanahy sy ny fandrobana amin'ny toetr'andro mafana dia mety mahatonga ny hafanana amin'ny bitro. Ankoatra izany, amin'ny tontolo mpifaninana, dia hihinana ny sakafo rehetra izy ireo, eny fa na dia ny fanimbana aza. Ny selam-barotra akaiky sy ny ambany ihany koa dia vokatry ny fisehoan-javatra marobe maromaro.
Amin'ny fahavaratra, manaova fepetra hanoherana ny hafanana sy ny hafanana. Noho izany, ny bitro dia nafindra tany amin'ny trano iray misy alokaloka. Azonao atao ny mangady volo kely ao anatiny.
Ny sakafo dia tokony ho amin'ny fotoana iray ihany, maraina sy hariva. Tokony hisaina ny sakafo.
Tsy afaka mandika am-pahamarinana ianao avy amin'ny sakafo iray amin'ny iray hafa.
Tsy mahazo manome siramamy sy zava-mamy izy io.
Ny rano misotro dia tokony hadio sy hafanana.
Mandeha mandeha tsy tapaka ao amin'ny aviary.
Ao amin'ny sakafo ho an'ny fisorohana dia misy ny herisetra - dill, mint, balom-boankazo, basil, parsley, marjoram, sage, lavender, lovage, harona, thyme. Ilaina ny manome ny voa avy amin'ny dill, fennel, cumin, anise. Avy amin'ny legioma - ginger, artichoke. Aoka ho azo antoka fa manampy salohalany ho an'ny sakafo. Amin'ny ririnina, ny herisetra sasany mahasoa azy (ravina, ramanavy, dandelion, ary ny hafa) dia azo omena amin'ny endrika maina na fakana azy ireo. Greens ao amin'ny fihinanan'ny bitro
Na dia miaraka amin'ny faminaniana tsy tapaka aza ny biby, dia mety hiafara amin'ny fery. Izany dia mitranga raha marary ny biby.
Fantaro ny fomba hatao: rabbitry, mpamatsy, mpihinana bitro.
Ny marary matetika dia famantarana famantarana aretina mifindra amin'ny tadin'ny gastrointestinal. Matetika ireo aretina ireo dia mivoatra amin'ny toe-javatra tsy manara-dalàna ary mifindra amin'ny biby hafa, ary indraindray amin'ny olombelona. Amin'io tranga io dia tokony hovana amin'ny biby ny biby, ary tsy manimba ny efitrano misy azy io. Ny hopitaly dia tokony hodinihan'ny mpitsabo iray ary handidy ny fitsaboana ilaina.
Ny soritr'aretina dia:
ny aretim-pivalanana, izay mety hosoloana ny fikorontanana;
Amin'ny endrika hepatic dia azo tsidihina ny fihenan-tsakafo.
Ny fitsaboana ny jody dia heverina ho fitsaboana azo ekena indrindra amin'ny coccidiose:
Ny bakteria avy amin'ny 25 andro nateraky ny fitondrana ary 5 andro taorian'ny okrol dia manome 100 ml ny vovo-javamanirina 0,02%, mitaky fiatoana mandritra ny 5 andro, avy eo amin'ny 10 hatramin'ny 25 andro amin'ny famoahana dia manome 200ml ny vahaolana iodine 0.02%;
Ny bryko marary dia mahazo vahaolana iray ihany, na dia tsy mamono ronono avy amin'ny vehivavy mitondra an'io zava-mahadomelina io aza, amin'ny voalohany dia manome azy 50 ml isaky ny loha, ary aorian'ny fivalozana 5 andro - 100 ml isaky ny loha;
Mba hahazoana solona 0,01% ny iodine, arotsaho ao anaty fitaratra vera misy ranom-boasary ny rano voapoizina, ary ampifanaraho amin'ny 1 ml 10% ho an'ny foto-tsakafon'ilay taolam-biby na manentana 2 ml 5%.
Misy fihenan'ny tsimok'aretina isan'andro amin'ny Sulfadimethoxin koa dia mahomby:
Ny andro voalohany - 0,2 g isaky ny 1 kg ny lanjany;
2-5 andro - 0,1 g isaky ny 1 kg;
aorian'ny 4 andro, avereno vakiana ny dingana.
Fantaro ny fampiasana Tromexin, Solikox, Gamavit, asidra ny laktika, Amprolium, ary Baytril ho an'ny bitro.
Misy fiantraikany amin'ny trakta ao amin'ny gastrointestinalina izy io ary manamarika ireto soritr'aretina manaraka ireto:
tsy fisian'ny faniriana;
Ny trondro dia mety ho voan'ny salmonellose amin'ny fifandraisana amin'ny akoho.
Ny olona salama dia tokony ho voan'ny vaksiny. Ny bryko marary dia voatsabo amin'ny "Furazolidone". Izy io dia miaraka miaraka amin'ny sakafo indroa isan'andro isan'andro iray isan-kerinandro amin'ny tahan'ny 30 mg ny zava-mahadomelina per 1 kg ny lanjan'ny vatana. Ny ambin'ireo biby amin'ny lamina ara-paminaniana dia manome ny antsasaky ny doka.
Ny sakafo avy amin'ny biby mitondra ny salmonella dia mety ho levona raha aorian'ny fery lava lava (farafahakeliny 1.5 ora).
Fantaro ny fomba handoavana bitro, toy ny bitro ilaina.
Misy fiantraikany eo amin'ny taova sy ny taovam-pananahana izany.
Ny soritr'aretina lehibe dia:
mitombo ny mari-pana vatana (+ 41-42 ° C);
conjunctivitis sy rhinitis misy tsiranoka manify.
Ny soritr'aretina goavam-be dia mivoaka amin'ny maso sy ny orona.
Fitsaboana omen'ny veterinarian iray, arakaraka ny fahasarotan'ny toetr'andro:
Amin'ny 3-4 andro dia manome fanafody sulfa (ohatra, "Sulfadimezin");
Ny 3 andro manaraka dia mitondra antibiotika ("Tetracycline" na hafa);
3-4 andro manome sulfonamides.
Ilaina ny mitaoka an'io aretina io.
Fantatrao ve? Ny bitry mahery nokendaina tsy misy bibidia any Aostralia sy Nouvelle-Zélande dia lasa loza tena izy eo amin'ny firenena. Namotika ny zavamaniry tsy manam-paharoa teo an-toerana izy ireo, namela ny hafa tsy misy sakafo maitso, anisan'izany ny biby tsy fantatra. Ny ady amin'ireo, ny foxes, ny tsimokaretina, ny rambony dia nentina tany amin'io kaontinanta io, ary nampiasa "fitaovam-piadiana bakteriolojia" aza - tratran'ny virosy myxomatosis mampidi-doza.
Ny fiterahana manasitrana amin'ny bitro dia mety ho marika famantarana ny stasis. Ny stasis gastrointestinal dia fihenana amin'ny fihetsika na fampitsaharana ny fivoahan'ny tsinay.
Ny antony mahatonga an'io aretina io dia:
ny vokatry ny aretina hafa - gaza, ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny banga, ny aretina vokatry ny areti-mifindra, sy ny sisa;
ny tsy fisian'ny tsy fahampian-tsakafo ara-tsakafo, ka tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny sakafo ho an'ny bitro ny zay;
bakteria mikorontana ny Clostridium spp karazana, izay, rehefa mitombo, dia mandray anjara amin'ny fametrahana gaza.
Ny tsangambato tsotsotra taloha dia hita fa mora kokoa ny fitsaboana.
Ny stress dia mety hitarika ny FSW, hianatra ny fomba fitaterana ny bitro miaraka amin'ny tsy fahampiana kely indrindra ho an'ny biby.
Ny soritr'aretina lehibe amin'ity aretina ity dia toy izao manaraka izao:
fandavana tsy hihinana;
lethargy, tsy firaikana;
fialonana sy fidradradradrana ny kibo;
ny felana sy ny fananganana ny lavaka mangatsiaka, izay mampiseho mazava tsara ny fanangonana ny gaza, ny sakafo ary ny fluid ao amin'ny tsina;
faharetan'ny fihetsiketsehana entina mandritra ny 10 ora na tsy fahampiana izany, miova amin'ny loko sy ny haben'izy ireo.
Stazis gastrointestinal amin'ny rétrop
Miaraka amin'ny areti-nify mafy ny biby, mahatsapa fanaintainana ny biby ary afaka midera azy ho faty. Misy tsiranoka mivoaka, toy ny tsindran-tsolika lehibe indrindra manomboka manery ny diapragma.
Ho an'ny fitsaboana ny stasis, ny biby dia voajanahary sy enemas, ary omena ireto fanafody manaraka ireto:
"Simethicone" - tena manampy amin'ny fametrahana gaza. Voalohany, omena inefatra, 1-2 ml isan'ora, ary 1 ml isaky ny 3 ora.
Fanaintainana - Fanafody solika no tokony ampiasaina (fampiasana amim-pahamalinana). Tsara kokoa ny manamboatra solika na menaka solitany, izay alefa ao anaty bitro ao am-bava miaraka amin'ny 2 ml isaky ny lanjan'ny 1 kg isaky ny 4 ora, mandra-pahatongan'ny seza sasany.
Травяное сено из тимофеевки и овса - при отказе от еды кроликов следует кормить насильно. Для этого смешивают травяные капсулы с тёплой кипячёной водой. Можно добавить также немного пюре из детского питания. Ny voka-dratsiny dia voangona ao anaty siramamy tsy misy fanjaitra ary omena 1-2 ml amin'ny fotoana iray, mitazona ilay tiroida kely amin'ny lafiny iray mba tsy hanosihosena ny biby.
Ny fikajiana ny vahaolana Ringer-Locke na glucose - no mahatonga ny bitro tena malemy, manampy amin'ny alàlan'ny fitsaboana.
"Tserukal" - dia hanomboka hanomboka ny asan'ny tsinay. Ampiasao 0,1-0,2 ml isaky ny 1 kg ny lanjan'ny vatana eo amin'ny vatany na 0.5-1.0 mg isaky ny 1 kg ao amin'ny takelaka 2-3 heny isan'andro. Alohan'ny hampiasana azy, dia tsara ny maka ray, satria mety hitera-doza izany raha tsy voasakana tanteraka. Raha misy fefy sasany farafaharatsiny, dia azonao atao tsara ny mitraka.
Ny fahasalamana - fanamaivanana fanaintainana dia tena zava-dehibe. Azonao atao ny mampihatra ilay "Rimadine" na "No-Shpu" malemy saina.
Ny fomba tsara indrindra dia ny mitandrina ny vatana mba hisorohana ny fahasarotana. Saingy tsy ilaina ny mitondra biby amin'ny dokotera matetika, satria ny tsindry fanampiny ho an'ny bitro dia tsy mety. Ny biby marary, raha tsy misy mariky ny fanafody, dia tsy mila afoy amin'ny hafa. Mety tsy miseho avy hatrany ny fandroana ny vatana. Manàna faharetana, toy ny indraindray ny biby sasany dia manomboka manary ny tsinainy raha tsy tapa-bolana.
Fantatrao ve? Ny sakafom-borona dia diabetika, misy kalôria vitsivitsy sy matavy, misy 85% ny proteinina mora simika. Tsy misy purinina izany, izay mahatonga ny fampiasana azo ekena ho an'ny marary amin'ny gout.
Ny fanavahana ny fiterahana dia mety ho tandindomin-doza ho an'ny bitro - mety hijanona ao amin'ny toeram-ponenana na ho marika hafa amin'ny aretina hafa sy mampidi-doza, anisan'izany ny aretina. Ilaina ny manara-maso akaiky ny toetry ny biby, mampihatra fepetra amin'ny fisorohana, ary amin'ny trangan'ny fiterahana, tokony hanomboka avy hatrany ny fitsaboana. Raha misy soritr'aretina hafa (alahelo, aretim-po, sns), dia tokony aseho amin'ny mpitsabo ny biby fiompy.
Rabies mitebiteby: lahatsary
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto ido Anarana iombonana amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / chelov. Ny ankizy pharmacy-Biseptol 120 dia mizara ho amin'ny 8 (fizarana 4) ary anaty siramamy miaraka amin'ny rano, mamelona ny bitro, afaka miditra ao anaty vinaingitra ianao ao anaty vodka 1 kiboka miaraka amin'ny menaka volom-borona 1 cc.
Ny ankamaroany dia mitroka amin'ny bitro noho ny sakafo. Sakafo maimbo na biby fiompy, voninkazo omaly, ahi-maitso na voamadinika, zavamaniry vaovao tsy misy orin-koditra, zavamaniry misy poizina hita any anaty ala na ahitra no vokatra rehetra izay miteraka tsy azo ihodivirana amin'ny fiainana an-tany ary, vokatr'izany, ny fahaverezan'ny toekarena. Noho izany ny kalitaon'ny sakafo dia mandiniha foana
Voalohany indrindra, ilaina ny manafoana ny mikroflora izay miteraka ratra ao amin'ny bitro, ary ento ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinalina. Ho an'ity fitetezana castorca na hema ity. Enema dia vita amin'ny rano mafana miaraka amin'ny ampahany kely amin'ny menaka solifara. Mijery ny zava-misy i Castor, mameno ny vava.
Ny hetsika ara-batana dia ilaina ihany koa ho an'ny bitro. Nalefa izahay mba handositra. Aiza - jereo ho anao. Mba tsy handosirana ho amin'ny tsara. Raha tsy te haka hetsika henjana izy, dia ratsy izany. Miaraka amin'ny zava-mahadomelina isika. Manome zavatra mampahory isika. Ny siramamy rehetra ataon'ny ankizy avy amin'ny fandrobana sy ny fivalozana dia hanao. Isika dia mandray amin'ny famokarana mahazatra. Manangona 1-2 kilo siramamy kely amin'ny savony madinika izahay, mandro ao anaty vava ny bitro. Miezaka ny tsy hipoaka izany. Raha toa ka mitsambikina ilay fanafody, mamerina indray, mameno lalina ny tady, fenoy izany. Tsy lazaina intsony fa tsy mila fanjaitra ilay angovo.
Anastasia, mamaky ny coccidiose, any Temko. Saingy ny zavatra tsikaritro rehefa manamaivana ny hery fanefitra ny fihenjanana, dia mihamaivana ny tsimatimanota izay mahatonga ny coccidia.
Ary raha ny zava-misy dia marary mafy iray - ny fihenjanana dia manamaivana ny tsy fahampian-tsakafon'ireo bry, ka miteraka ny lolom-pandam-baravaran'ny pesta sy ny fivoaran'ny coccidia.
Ny tsy firaharahiana ny bitro dia napetraka amin'ny rononon-dreny. Raha mahazo ronono ampy ny bitro, dia hihahery kokoa izy. Noho izany, ry vehivavy vavy, manintona ny ronono izahay. Tsy ny vehivavy rehetra no manana bala toy izany koa. Misy vehivavy afaka mamahana mora tsiron-kanina 10 sy mihoatra, ary misy ireo izay misisika enina. Ireto ny tsy fahampian'ny tsimok'aretina bitika
Mahatsiaro ny fandrebirebena: ahoana no fomba hiatrehana izany?
Tavoahangy voatabia "Kavina": famaritana, karazana varotra miavaka sy sary
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Inona no tokony hataonao raha manana kibo mirobona ny bitro